निर्मात्री बनेकी प्रथम नायिकाको आशंका : फिल्म प्रदर्शनमा ठूलै राजनीति हुन्छ रे ! – kalikadainik.com
निर्मात्री बनेकी प्रथम नायिकाको आशंका : फिल्म प्रदर्शनमा ठूलै राजनीति हुन्छ रे !
सोमबार, आषाढ १६, २०७६ | ९:०३:१५ |
काठमाडौं । भनिहाल्नु पर्दैन् भुवन चन्द नेपालकी प्रथम नायिका हुन् । उनी २०२१ सालमा बनेको फिल्म ‘आमा’बाट नेपालकी प्रथम नायिका बनेकी हुन्। भुवनले रंगमञ्च हुँदै फिल्ममा पाईला राखेकी हुन्। दुई दर्जन बढी फिल्ममा अभिनय गरेकी भुवनको अहिले परिचय थपिएको छ। उनी फिल्म निर्मात्री पनि भएकी छिन्। उनको निर्माणमा बनेको फिल्म ‘साइनो’ आउँदो साउन २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ।
फिल्म निर्माण पहिलेदेखिको योजना नभई संयोग भएको भुवन बताउँछिन्। ‘यो एउटा जुरेको संयोग मात्र हो’, डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्–‘पहिलेदेखि त्यस्तो केही योजना थिएन। अकस्मात फिल्म निर्माण भयो।’
हिजोसम्म उनलाई केही सहज थियो। त्यो उनकै अनुभवले भन्छ। साइन गर्यो। अभिनय गर्यो। डविङको समयमा स्टुडियो पुग्यो। कहिलेकाँही प्रचारप्रसारमा हिँडयो। कलाकार भएर काम गर्दा यति गरेपछि सकियो। अनि निर्मात्री भएपछि नि? ‘त्यतिले मात्र कहाँ हुन्थ्यो र!’ भुवन भन्छिन्–‘निर्माता हुँदा त कति धेरै जिम्मेवारी हुँदो रहेछ।’ तर निर्माण टिम, सञ्चारमाध्यमको राम्रो साथ पाएका कारण केही सहज भएको बताउँछिन्।
अहिले धेरै फिल्मले गतिलो व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो उनले पनि बुझेकी छिन्। ‘अहिले दर्शकको रोजाई बुझ्नै गाह्रो छ। यो फिल्म चल्छ भनेर पनि चलिरहेको छैन्। चल्दैन होला भनेको फिल्म चलेको पनि पाइन्छ’, आफ्नो फिल्मप्रति केही सकारात्मक हुँदै थप्छिन्–‘हामीले सामाजिक कथामा राम्रो फिल्म बनाएका छौं। दर्शकले पक्कै रुचाउनुहुनेछ।’
रिलिज मिति नजिकिँदै जाँदा उनले फिल्म प्रर्दशनबारे सुनेकी छिन्–फिल्म बनाउन भन्दा चलाउन गाह्रो हुन्छ! भन्छिन्–‘फिल्म बनाएर त सकियो। प्रदर्शनमा ठूलै राजनीति हुन्छ रे! हेर्दै जाउँ मेरो फिल्ममा के हुने हो?’ रमेश थापा निर्देशित ‘साईनो’मा अभिमन्यु निरवीको कथा रहेको छ।
फिल्ममा नीता ढुंगाना, मिरुना मगर, राज कुमार, भुवन चन्द, मदनदास श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ।